အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်း | ဒစ်ဂျစ်တယ် Options ကိုထရေးဒင်း Techniques - စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing
အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေး platform ပေါ်တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ် options များအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ဘယ်လိုစတင်ရန်
ဒါဟာအစကောင်းစွာသင်နှစ်သက်တဲ့ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာလျှောက်ထားရန်လွယ်ကူစေနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ tools များနှင့်အင်္ဂါရပ်များစွာနှင့်အတူဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။
web browser ကိုနှင့်မိုဘိုင်း app ကနေတဆင့်လက်လှမ်း, သင်အလွယ်တကူအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်နှင့်အတူလုံးဝနီးပါးမဆိုတည်နေရာမှသင်၏အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ကို log နိုင်ပါတယ်။
ဒီသင်ခန်းစာထဲကအကောင်းဆုံးရရန်အလို့ငှာ, ငါသင်သည်သင်၏သရုပ်ပြအကောင့်ကို log နဲ့ကျွန်မပြောခဲ့တဲ့ခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာအကြံပြုပါသည်။
သင်တစ်ဦးအိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရငျ, အခမဲ့ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် $ 10000 ရဖို့ကဒီမှာ click လုပ်ပါ။
အဘယ်ကြောင့်ငါပထမဦးဆုံးမှာသရုပ်ပြအကောင့်ကို အသုံးပြု. အကြံပြုသလဲ?
အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေး platform ပေါ်တွင်ကုန်သွယ်မှုလုပ်နည်း။
အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေး platform ပေါ်တွင်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရလဒ်တွေကဘာတွေလဲ?
အဆိုပါသရုပ်ပြအကောင့်ကိုလည်းကွဲပြားခြားနားသောပိုင်ဆိုင်မှုများကို, tools များနှင့် platform ပေါ်တွင်မရရှိနိုင်ပါဇယားကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကလွယ်ကူစေသည်။
1 ။ ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုသင့်ကုန်သွယ်အကောင့်ကိုသစ်ခုတ်ပါဝငျသညျ။ ပြီးတာနဲ့သင်ကအောက်ကတဦးတည်းတူသောကုန်သွယ်ဇယားကိုကြည့်ပါတာပေါ့အတွက် logged ။
အဆိုပါဇယားရိုးရှင်းစွာအခြေခံပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုဖန်တီးနေသည့်လမ်းကြောင်းသစ်ပြသထားတယ်။ သင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းဘယ်ဖက်မှာဇယား icon ပေါ်မှာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဇယား type ကိုပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျကိုသုံးနိုင်သည် example ဇယားဂျပန်ခုံများနှင့်ဧရိယာကိုဇယားများပါဝင်သည်။
သင်သည်သင်၏ဇယားအပေါ်ကိုသုံးနိုင်သည်ကိုအခြား tools တွေနဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ tools များဖြစ်ကြသည်။
2 ။ သငျသညျကုန်သွယ်မှုချင်သောနောက်ခံပိုင်ဆိုင်မှု pair တစုံကိုရွေးချယ်ပါ။ အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေး 70 ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းကိုဖြတ်ပြီးရေးဆွဲ5ကွဲပြားခြားနားသောတူရိယာကျော်ပေးထားပါတယ်။
ဤရွေ့ကားငွေကြေးအားလုံး, cryptocurrencies, ကုန်စည်, ညွှန်းကိန်းများနှင့်လဲလှယ်-ကုန်သွယ်ထိတ်ပါဝင်သည်။ အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းအကြောင်းကိုတစ်ခုမှာအေးမြသောအရာတိုင်းတူရိယာအောင်မြင်သောအရောင်းအပေါ်မျှော်လင့်ထားသည့်ထိရောက်သောပြန်လာနှင့်အတူတင်ပြကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
tradable တူရိယာတပြင်လုံးကိုစာရင်းရရှိရန်ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ကုန်သွယ်မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းဘယ်ဖက်အပေါ်ပေါင်း '+' icon ကို click လုပ်ပါ။
3 ။ Next ကို, သင်အနေအထားကိုင်ထားချင်ဘယ်လောက်ရှည်လျားကိုရွေးချယ်ပါ။ options နှစ်ခုရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအသငျသညျအနေအထားကိုင်ထားချင်မိနစ်သို့မဟုတ်နာရီအတွင်းအချိန်ကိုရွေးချယ်ရာတွင်ပါဝငျသညျ။
4 ။ နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်းကိုသင်ကုန်သွယ်ရေးအပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်ပိုက်ဆံပမာဏကိုရွေးချယ်ခြင်းပါဝငျသညျ။
သင့်အကောင့်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. ဒီ $ 10 မှ $ 5000 သကဲ့သို့အနိမ့်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာအမြဲတမ်းတစ်ခုတည်းကုန်သွယ်မှုပေါ်တွင်သင်၏စုစုပေါင်းအကောင့်တန်ဖိုးကိုထက်ပို 5% ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမအကြံပြုပါတယ်။
သငျသညျ $ 500 ၏အကောင့်တစ်ခုချိန်ခွင်လျှာအတူစံအကောင့်ပိုင်ရှင်ဆိုရင်ထိုကွောငျ့, သငျသညျတစ်ခုတည်းကုန်သွယ်မှုအပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်အများဆုံးပမာဏကို $ 25 ဖြစ်ပါတယ်။
5 ။ သင်စျေးနှုန်းကုန်သွယ်ရေးကာလရဲ့အဆုံးမှာပိုမိုမြင့်မားသို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းဖြစ်ဖို့မြျှောလငျ့ပါလျှင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ button ကို '' ချ 'ခလုတ်ကိုဒါမှမဟုတ်အနီရောင်' 'တက်' 'အစိမ်းရောင်ပေါ်တွင်ကလစ်လုပ်ပါ။
ကို 'တက်' သို့မဟုတ် '' ချ '' button ကို click ရန်ရှိမရှိအကြီးအကျယ်အနာဂတ်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုခန့်မှန်းရန်သင့်စွမ်းရည်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။
အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေး platform ပေါ်တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ် options များအရောင်းအဝယ်ဖြစ်2ဖြစ်နိုင်သောရလဒ်များရှိပါတယ်:
1 ။ သင့်ရဲ့အရောင်းအနိုင်ရနှငျ့သငျစံအကောင့် 80% အထိအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်များအကောင့်% 92 မှတက်၏ထိရောက်သောပြန်လာရပါတယ်။
2 ။ သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်မှုပိုက်ဆံထဲကအဆုံးသတ်ထားသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်အတွက်, သင်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကိုဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင်တစ်ခုတည်းကုန်သွယ်မှုပေါ်တွင်သင်၏အကောင့်လက်ကျန်ငွေထက်ပို 5% ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဘူးအကြံပြုရဲ့အဘယ်ကြောင့်မူလတန်းအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်သို့သော်သင်သည်အောင်မြင်သောအရောင်းအသင်သည်သင်၏အကောင့်ထဲသို့ log အခါတိုင်းအာမခံပါတယ်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
- ကနဦးနှင့်အတူကုန်သွယ်မှုနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုရယူပါ။ ဤရွေ့ကားအချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအတွင်းခြေရာခံစောင့်ရှောက်ဖို့ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျလည်းစီးပွားဖြစ်အနည်းငယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးအရောင်းအဝယ်ဖြစ်အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတာနဲ့, သင်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစုစုကိုပိုမိုဘဏ္ဍာရေးတူရိယာကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
- တစ်ဦးသင့်လျော်သောကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်နှင့်သင့်အရောင်း၌အသုံးပြုပါ။ အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောမဟာဗျူဟာများရှိပါသည်။ မတည်ငြိမ်သောစျေးကွက်များတွင်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့်အခါအခြားသူများကိုကြာရှည်စွာများအတွက်အတော်လေးမပြောင်းလဲကျန်ကြွင်းသောစျေးကွက်များတွင်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်နေစဉ်သို့သော်အချို့ပိုကောင်းအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
- အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းမြောက်မြားစွာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိရိယာများနှင့်အညွှန်းကိန်းပေးပါသည်။ စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံနှင့်အနာဂတ်စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့မကြာခဏသူတို့ကိုသုံးပါ။
- ငွေစီမံခန့်ခွဲမှုကုန်သွယ်အောင်မြင်မှု၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုတည်းကုန်သွယ်မှုပေါ်တွင်သင်၏အကောင့်လက်ကျန်ငွေထက်ပို 5% ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဘယ်တော့မှမ။
- အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးကြီးမားတဲ့စုစည်းပေးပါသည် အရင်းအမြစ်များကိုလေ့လာသင်ယူ။ အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်သူတို့ကိုရှောက်သွားကြဖို့သေချာအောင်လုပ်ပါ။
Options ကိုကုန်သွယ်အန္တရာယ်သယ်ဆောင်။ သို့သော်ဤပလက်ဖောင်းကဒီအန္တရာယ် minimize လုပ်ဖို့ကူညီအများကြီးအသုံးဝင်နှင့်ကုန်သည်ဖော်ရွေ features တွေပေးစွမ်းသည်။
ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောအိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးလဲ tutorial နှင့်လမ်းပြကိုသင်အထောက်အကူဖြစ်ရပြီနှင့်သင်မကြာမီသင့်ရဲ့အရောင်းအထဲကနေအမြတ်အစွန်းစတင်ပါလိမ့်မယ်ငါ့မျှော်လင့်ချက်ပါပဲ။
သင်တစ်ဦးအိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ဖွင့်လှစ်သေးဆိုရင်, ဒီမှာ click နှိပ်ပြီးယခုသင့်သရုပ်ပြအကောင့်ထဲမှာ $ 10000 ရ!
Tags: ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးကုန်သွယ် options များ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ရွေးချယ်စရာကုန်သွယ်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းကို download လုပ်ပါ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေး, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်း, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုအွန်လိုင်းကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်း, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းရဲ့ login, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း, ဒစ်ဂျစ်တယ် options များအရောင်းအဝယ်ဖြစ်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုဘာလဲ